(187115) 2005 QU69
(187214) 2005 SD111
(187227) 2005 SJ143
(187245) 2005 SV190
(187250) 2005 SQ221
(187268) 2005 TH32
(187285) 2005 TS72
(187296) 2005 TV139
(187391) 2005 UF485
(187404) 2005 VK43
(187500) 2006 SX352
(187547) 2006 UG230
(187579) 2006 WA27
(187784) 1998 SL148
(188000) 2001 SR204
(188013) 2001 TQ124
(188098) 2001 YT13
(188170) 2002 GQ179
(188173) 2002 HN15
(188246) 2002 WE15
(188253) 2002 XM73
(188313) 2003 FM36
(188379) 2004 CA60
(188552) 2004 TB14
(188565) 2004 TR122
Ny 2003 BF81 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2003 HU42 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2003 PN3 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2003 WU45 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2003 WR130 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2003 WL133 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2003 YV17 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2003 YO36 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 BZ98 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 BQ109 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2004 CP17 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 CV59 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2004 CG76 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 CO103 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2004 DO31 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 ED36 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2004 HG58 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2004 LX6 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2004 RR186 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2005 EO283 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2005 GG178 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 1994 GY10 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2005 JU155 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2005 MM41 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2005 NT20 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 1994 PN13 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2005 OZ1 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fih ...
Ny 2005 PR5 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2005 QS16 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2005 SM78 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2005 SL131 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2005 SD153 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2005 TE190 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2005 UV9 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2005 UD82 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2005 WA100 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2006 BV252 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 1996 PY4 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroani ...
Ny 2006 RG59 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2006 RB62 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2006 RR87 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2006 SK13 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny fi ...
Ny 2006 SV23 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2006 SA34 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 1996 TE11 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroan ...
Ny 2006 SC212 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2006 SK280 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2006 TA115 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...
Ny 2006 UE182 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka izay hita fa mihodikodina manodidinny Masoandro. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroanizy ireo dia tsy hita maso noho ny hakeliny ary noho ny hamaizinny lokony. Ny f ...
Ny 2006 US198 dia anisanny zavatra madinidinika ao aminny habakabaka. Eo aminny fehibenny asisterôida no misy azy, ary, tahaky ny ankamaroanny asiterôida dia mihodikodina manodidonny masoandro izy. Ity zavatra madinidinika ity tahaka ny ankamaroa ...